Ninkii dilay Madaxii DP World ee Boosaaso oo geeriyooday | Wardoon
Home Somali News Ninkii dilay Madaxii DP World ee Boosaaso oo geeriyooday
Ninkii dilay Madaxii DP World ee Boosaaso oo geeriyooday
Isbitaalka guud ee magaaladda Boosaaso ayaa waxaa caawa ku geeriyooday ninkii fuliyey dilkii saaka loo geystay maamulihii dekadda Bosaaso ee shirkadda P&O ee hoos tagta DP World oo lagu magacaabi jirey Paul Faramosa.
Ninkan oo magaciisa ku sheegay Cabdullaahi Ibraahim Maxamed ayaa geeriyoodey ka dib markii lagu sameeyey qaliimo lagaga saarayey xabado illaa sadex meelood kaga dhacay sida ay sheegeen saraakiil ku sugan magaalada Boosaaso.
Baraha bulshada ayaa waxaa la soo geliyey ka hor inta uusan geeriyoon muuqaal laga duubay Ninkan oo isagoo dhaawac ah ay wareysanayaan ciidamada amniga Puntland waxaana uu sheegay inuu ka soo jeedo ama ka yimid magaaladda Baydhabo ee xarunta gobalka Bay.
Geerida ninkii ka dambeeyay dilka agaasimaha shirkadda P&O ee hoos tagta DP World ayaa meesha ka saartay raadraac lagu sameyn lahaa shaqsiyaadkii kale soo abaabulay weerarka oo Al-shabaab ay sheegatay.
Previous articleWadamada reer Yurub oo Madaxweynaha Venezuela u aqoonsaday Juan Guaido
Next articleTaliyihii guutada 12 April oo qarax lagu dilay
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad shaaciyay sirqoolka Farmaajo
Hooyo Xaawo:-“Inta aan tukanayey Salaadda Maqribka ayaa la xaday ilmihii yaraa